Madaxwaynaha DDSI oo Booqasho indha indhayn ah ku soo Maray Mashaariicda Dhismayaasha ee Kor Loogu Qaadayo Tayada Baris-Barasho iyo Bilicda xarunta kuliyada maaraynta iyo adeega shacabka DDSI. - Cakaara News
Madaxwaynaha DDSI oo Booqasho indha indhayn ah ku soo Maray Mashaariicda Dhismayaasha ee Kor Loogu Qaadayo Tayada Baris-Barasho iyo Bilicda xarunta kuliyada maaraynta iyo adeega shacabka DDSI.
Jigjiga(CN)Arbaco Sept,17,2014. Sanadihii ugu danbeeyay ayaa ay Xukuumada maantu si daran-doori ah hadh iyo habeenba Guntiga u xidhatay sidii ay deegaanka ka taabogaliso nidaam hogaamineed oo tayaysan kuna gaashaaman aqoon iyo xirfado waxxtar u noqda jiilka soo koraya iyadoo dadaal xoogan ay xukuumadu isku taxaluujisay sidii ay Dhinaca Waxbarashada Deegaanka kor ugu qaadi lahayd iyadoona Dardargalinta iyo hirgalinta mashaariicaha horumarineed ee ka socda deegaanku yahay halbeega isbedeladaxukuumada DDSI.
Waxayna xukuumada sanadihii ugu danbeeyay ku hirgalisaa mashaariicaha wakhti hooban. Haddaba waxaa maanta booqasha indha indhayn ah ku soo maray mashruuc kor loogu qaadayo bilicda xarunta kuliyada maaraynta iyo adeega shacabka DDSI masuuliyiinta xukuumada ugu saraysa oo uu ka mid yahay madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud cumar, madaxwayne ku xigeenka DDSI ahna wasiirka waxbarashada DDSI mudane Mawliid haayir xassan, wasiirka madaxtooyada DDSI mudane ahmed maxamed shugri iyo masuuliyiin kale .
Mashruucan oo ah mid siwayn kor loogu qaadayo bilica iyo quruxda xarunta kuliyada maaraynta iyo adeega shacabka ee DDSI sidaan wada ogsoonahayna waxaa kuliyada laga hirgaliyay dhismayaal aad u waawayn oo si habsamiya loo dhisay wakhtigii u diyaar garowgii xuskii maalinta qoomiyadaha iyo shucuunta itoobiya waxayna si meeqaan sare ah uga qayb qaateen dhismayaashaasi martigalintii qoomiyadaha.
Sidoo kale dhismayaashan laga hirgaliyay xarunta kuliyada maaraynta iyo adeega shacabka waxay kaalin mug leh ka qabteen martigalinta tababarada iyo shirarka ay xukuumadu qabsanayso. Mashruucan ayaa ah in wadooyin aad u qurux badan dhirayn iyo goobo ku haboon ku nasashada iyo dalxiiska loogu sameeyo dhismayaashaasi. Mashruucan oo hadda gabagabo maraya ayaa waxay masuuliyiintan uu horkacaya madaxwaynuhu ku soo wareegeen dhamaan goobola laga wado mashruucan.
Waxaana saxaafada deegaanka ugu warbixiyay mashruucan madaxwayne ku xigeenka DDSI ahna wasiirka waxbarashada DDSI mudane mawliid haayir oo isagu hore u ahaan jiray maareeyaha kuliyada maaraynta iyo adeega shacabka DDSI wuxuuna ka waramay ahmiyada uu leeyahay mashruucan lagu qurxinayo xarunta kuliyada maaraynta iyo adeega shacabka isaga oo sheegay in ay tahay xarun ay tababaro ku qaadaan hogaaminta kal duwan ee DDSI loona baahan yahay in ay noqodo mid siwayn bilicdeede aad u sarayo wuxuuna sheegay madaxwayne ku xigeenku kuliyada dadaal dheer ugashay sidii mashruucan lagu qurxinayo kuliyada loo hirgalin lahaa taasi oo buu yidhi hada marayso gabagabo dhawaana xadhiga laga jaridoono.